युद्धमा सन्देश पठाउने, विज्ञानमा पनि उपयोगी साबित चङ्गाको कुरा | Ratopati
युद्धमा सन्देश पठाउने, विज्ञानमा पनि उपयोगी साबित चङ्गाको कुरा
चंगाको बारेमा केही रोचक तथ्यहरु
हिन्दू धर्म मान्नेहरुको महान् चाँड दशैँ पनि भरखरै सकियो । दशैँभन्ने बित्तिकै हामी नयाँ लुगा र मिठो खानेकुरा सम्झिहाल्छौँ । दशैँमा साँच्चै नै निकै रमाइलो हुने गर्छ । टाढा भएका आफन्तहरुलाई भेट्न पाउँदा त झन खुसीको सीमा नै रहँदैन । दशैँमा हामी चंगा पनि खुब उडाउने गर्छौँ । साथीभाइहरुसँग मिलेर छतमा बसेर चंगा उडाउनुको मजा नै अर्को हुन्छ । चंगा त हामी धेरैले उडाउने गर्छौँ । तर चंगाको प्रचलन कहाँबाट सुरु भयो होला त ? यो कुरा जान्ने कोसिस गरौं ।
इतिहासका पानाहरु पल्ट्याएर हेर्दा चंगाको प्रयोग प्राचीनकालदेखि नै भएको पाइन्छ । यसको प्रयोग हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीनमा इं.पू. २०० तिरै हुने गरेको पाइएको छ । त्यसबेला हान वंशका जनरल हासिनले युद्धको समयमा आफ्नो दुश्मन रहेको स्थान थाहा पाउनका लागि चंगाको प्रयोग गर्ने गर्थे । त्यसैगरी यूरोपमा पनि धेरै पहिलेदेखि नै चंगाको प्रयोग गरिन्थ्यो । इं.पू. २३० मा ग्रीसका आर्कीमिडिजले आफ†नो मित्र प्लेटोको नक्सा भएको चंगा उडाउने गर्थे ।
पहिले चंगाले युद्धको समयमा निकै ठूलो भूमिका खेल्ने गर्थ्यो । यसको प्रयोग विशेष गरेर विभिन्न खाले संकेतहरु आदानप्रदान गर्नका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । उदाहणका लागि, कुनै किल्लालाई दुश्मनहरुले हमला गर्‍यो भने आफ्ना नजिक रहेका अन्य साथीहरुलाई बोलाउनका लागि किल्लाका सैनिकहरुले चंगा उडाउने गर्थे ।
हवाइजहाजका आविष्कारक राइट ब्रदर्स । https://historycollection.co
युद्धमा मात्र होइन्, चंगा विज्ञानको क्षेत्रमा पनि निकै प्रयोग भएको छ । झट्ट हेर्दा चंगा निकै सानो र सरल देखिन्छ । तर आकारमा सानो भएपनि चंगालाई हामीले चढ्ने भीमकाय हवाइजहाजको पिता मानिन्छ । यो कुरा सुन्दा तपाइँहरुलाई निकै अचम्म लाग्छ होला तर चंगा उड्ने प्रक्रियालाई नै आधार मानेर अमेरिकाका राइट दाजुभाइले पहिलो हवाइजहाजको निर्माण गरेका थिए । त्यसैगरि अमेरिकी वैज्ञानिक बेन्जामिन फ्राङक्लिनले चंगाकै मद्दतले आकाशमा विजुली चम्कदाँ त्यहाँ विद्युतको उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका थिए ।
चङ्गा उडाएर विजुलीको प्रयोग गर्दै बेन्जामिन फ्राङक्लिन । तस्विर: https://newsela.com
आजभोलि भने चंगालाई केवल मनोरञ्जनको स्रोतको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नेपाल लगायत विभिन्न देशहरुमा विभिन्न अवसरहरु पारेर वर्षैपिच्छे चंगा उडाउने महोत्सवहरुको आयोजना हुने गर्छ । नेपालमा भने यस्ता महोत्सवहरु विशेष गरेर दशैँकै अवसर पारेर आयोजना गरिन्छ । किनभने यति बेला मौसम खुला हुन्छ र हावा पनि अरु बेलाभन्दा राम्ररी चल्ने गर्छ । जापानमा पनि मानिसहरु चंगा उडाउने महोत्सवहरु आयोजना गर्ने गर्छन् । त्यहाँ उनीहरु विभिन्न आकारका चंगाहरु बनाएर नाचगानाका साथ उत्सव मनाउँछन् । त्यसैगरी चीनमा पनि ठूला ठूला चंगाहरु उडाउने अर्को एउटा उत्सवको पनि आयोजना हुन्छ । त्यति बेला उडाइने चंगामा हात र मेसिन प्रयोग गरेर विभिन्न खाले नक्साहरु पनि बनाइन्छ । मेसिनले नक्सा बनाइएको चंगाभन्दा हातले नक्सा बनाइएका चंगाहरुलाई विशेष महत्व दिइने गरिन्छ । त्यस्ता चंगाहरु धेरै मोलमा बिक्री हुने गर्छ । जापानका केही समुदायमा वार्षिक रुपमा चंगा उडाउने चाँडको आयोजना गरिन्छ । त्यस चाँडमा हमामास्तु प्रान्तमा टाढा–टाढादेखि मानिसहरु आएर हरियो चौरमा बसेर चंगाहरु उडाएर उक्त चाँड मनाउँछन् ।
धेरै पहिलेदखि नै चंगाले मानिसलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आएको छ । यति मात्र होइन विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारहरुमा मद्दत पुर्‍याएको छ । मानव सभ्यताको विकास र प्रगतिमा पनि यसको ठूलो हात रहेको छ । आकारमा सानै भएपनि यसको हाम्रो दैनिक जीवनमा निकै ठूलो भूमिका रहेको छ ।
Title Photo: https://i.cbc.ca
#विज्ञान जानकारी#चङ्गा# बेन्जामिन फ्राङक्लिन